Ramangwana reCRMs - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Chatbots, CRM, Kuvimbika kwevatengi, Machine Learning, Kufanotaura Ongororo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
CRM (Mutengi Ukama Hwehukama Management) ndeyazvino pakati pekushandurwa kwehungwaru, uye mumakore anotevera, hatizofunge Machine Learning uye AI zvakasiyana neCRM. Vachave vakajairika mumaCRM masisitimu uye vanozochinja zvese zvekugadzira uye zvisiri zvemagariro meseji kuburikidza nerwendo rwevatengi.
Iyo ramangwana reCRM rakajeka. CRM inoramba ichizivisa kiyi data uye ichipa yakadzika-ruzivo rwechiitiko mune ramangwana. Asi zviremera zvekutyaira zvinoona kufambira mberi kweCRM kuyera uye kuzivisa kubatanidzwa kwevatengi uye kugoneswa kwekutengesa pachinomiririra basa rakakura rekuve neramangwana rakabudirira rebhizinesi.
Saka, CRM irikuenda kupi? Chii chinoda kushandura kuwedzera simba rayo? Aya ndiwo mashoma emibvunzo vanhu vanonetseka kuti vane kana vari kufunga kushandisa CRM tekinoroji yekugadzirisa yavo yekutengesa.
In case that the business work processes were as keen and simple to use as Alexa or Siri, sales team would absolutely utilize it increasingly and appreciate the full advantages of a CRM kushandisa michina.
Kuenderera mberi kweCRM kunobatsira mabhizinesi mune 360-degree pikicha Nematare ese data aripo makambani anogona kuve nemukana usingaenzanisike wekucherechedza vatengi mune zvakadzama zvakadzama kupfuura nakare kose.
The CRM kushandisa michina can enhance the business procedure essentially which incorporates capacities like customized interactions and client-focused proposals dependent on past actions, can facilitate a sales representative’s frequently complex duty of generating leads and closing sales.
Kugamuchira CRM ye rokutengesa kushandisa michina kune yako reps yekutengesa yakakosha zvakanyanya, sezvo ichideredza huwandu hwebasa kune mumwe nemumwe waunoshanda naye, inobvumira maneja kuti arambe aine yakanyorwa uye inoyerera pombi, pamwe nekuchengetedza vatengi uye tarisiro dzakabatana neyakajairwa kutaurirana.
Kune huwandu hwakakura kwazvo hwezviitiko zvinogona kugadzirirwa zvine mutsindo zvekuti kuvandudzwa kwemubatsiro kunozotanga kufashukira chero timu yekutengesa nekukurumidza mushure mekuurayiwa.
Mubatsiri anotyairwa nezwi akatove kuitwa naOracle muna2014 asi yaive yakawanda huwandu hwekusarudzika panguva iyoyo. Sekupedzisira, Zoho yakaburitsa yayo Zia izwi chaiyo mubatsiri kugonesa vatengesi kuti vatambe nhanho zvavo zvirinani.
Mutevedzeri weMutungamiriri uye Anotungamira Muongorori weForrester, Kate Leggett anofanotaura kuti vese vanobatsira mazwi, pamwe ne chatbots, vachawana mvumo isina muganho.
Kupupurira kufambira mberi mukati kucherechedzwa kwenzwi uye NLP, vatengesi vazhinji veCRM vanozoita zvinoenderana. Zvizhinji zveava vane hungwaru-vanofambiswa nezwi vabatsiri vanozobatsira mune akasiyana asingakoshi uye anodzokorora mabasa epamba. Izvi zvinosanganisa kupinda kwedata uye zvakarongeka zvinotungamira mumutsetse uye zvemukati mazano.
Kutarisa kuData Tunnels
Kufanotengesa zvekutengesa analytics uye mu-yakadzika ruzivo
Kufanotaura analytics inopa yakakosha data nezve mutengi uye maitiro avo. Uye izvi ndizvo zvekukosha kwakanyanya kwechengetedzo yepamusoro yevatengi. Mhedzisiro yekupedzisira kweCRM iri mukukwanisa kwayo kupedzisa danho rekutora.
Kunze kwezvo, kudzidza uye kunzwisiswa kweimwe indasitiri uye bhizimusi rezvikwanisiro zvekufashukira kwakakosha mukuwana zvinotungamira uye nekuchengetedza vatengi. Sezvo vari ivo vatengi vari kudzoka vanozopa zvakanyanya uye vatenge zvakanyanya nguva zhinji kupfuura vatengi vatsva.
Predictive data inosanganiswa ne chakagadzirwa Intelligence system inogona kupa dhata-inofambiswa kurudziro iyo inosimudzira kugona kwemumiriri wekutengesa.
Chokwadi, kuchema kweAI mubatanidzwa kwatova nemakore mashoma apfuura. Vashandisi vepamberi parizvino vanoda zvese zvakaputsika pasi Machine Learning uye AI kubata chaiwo chaiwo CRM kugona.
Misa kusarudzika kuburikidza nekuchera dhata
Misa Personalization chimwe chakakosha chinangwa cheiyo rokutengesa kushandisa michina ramangwana. Iko kugona kuve neese kutaurirana kwevatengi kunoratidzwa nemutengi pachavo kunotungamira mukukwanisa kwehukuru hwekuita.
For instance, it could in all likelihood be reasonable to enter a supermarket, and have an application that automatically creates a shopping list depending on your past shopping habits and utilization rates. Hence, mass personalization will be a probability through great enclosing date kuchera of the accumulation of significant information through sales enablement.
Nepo hunyanzvi hungangove husiri padyo nahwo, kuwanda kwemunhu kunogona kukanganisa maitiro ayo zvinhu zvinoitwa mune ramangwana rinouya.
The current CRM implementation matambudziko that need to be tackled for a better future include
The matambudziko linked with a CRM technology involve the requirement to invest a notable amount of money in the procedure. As the CRM does not come at a low price, companies should make the needed investments and be ready to keep patience and let the profits actualize rather than being anxious and demanding immediate resolutions.
Chaizvoizvo, chokwadi ndechekuti kusangana kweCRM kunowanzo kuve basa rakareba rakareba. Izvi zvinoratidza kuti kubatanidzwa kubva mukutengesa kunofanirwa kuve kwakadzika uye kwakakosha.
2. Kushaikwa kweVendor-Bhizinesi musangano
Zvakare, kuitiswa kweCRM kunoonekwa sekushayikwa kwekubatana pakati pevatengesi nemabhizinesi.
Izvi zvinowanzoendesa kumamiriro ezvinhu kusagutsikana sezvo vatengesi vasina kunzwisisa mamiriro acho nenzira kwayo uye makambani anomanikidza vatengesi kuita kwakamhanya-mhanyisa uye nekukurumidza kudzoka.
Along with these matambudziko, the sales reps require to be instructed suitably and this is a viewpoint that doesn’t get the recognition it deserves. It’s due to the fact that until the reps are trained in managing the CRM tool, there are possibilities of mismatches among the sales reps’ estimations and the existence of the CRM usage.
In a nutshell, here are the reasons you might need to embrace kushandisa michina of CRM tools for the better future of your business:
Kana kutengesa kwako kuchinonoka.
Kana iwe uri kusangana nedambudziko mukuendesa chaiko kufanotaura.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wakadzora nguva.
Kana iyo data yekupinda iri kutora kutonga pamusoro pehupenyu hwako.
Kana boka rako rekutengesa rakaomarara.
Kana iwe uchizoda rutsigiro mukutungamira chizvarwa, hunhu, uye inotsigira nhimbe.
Kana iwe uri kutambura nekuwedzeredza kudzokorora kwekutengesa uye kushambadzira kuedza.
Kana kana zvinhu zvese, kubva pauri kutsvaga kusvika pakuvhara kwako kuchitungamira, inoda shanduko.
The future is no doubt digital, so there is no better time for implementing CRM kushandisa michina to your business like the present. The characteristics of the rokutengesa kushandisa michina zvine mutsindo zvinoenderana nechinodikanwa sezvo chichifanirwa kuve chakabatana zvakanyanya kune rakakura zano iro iro ruzivo runofanira kubatsira kambani kwete chimwe chinhuwo zvacho.
Zviripachena, haasi makambani ese akazadzisa kukosha kwaanga achitsvaga nekumisikidza CRM. Kuendesa kukosha kwekutengesa kunze kweCRM kunopfuura iko kushandiswa, kwakasungirwa mukati nekuvandudza mashandisirwo evatengi data rakagadzirwa.
Izvo zvakakosha kuti CRM iende kune yakanyanya kubatanidzwa uye divi revanhu rekubata uko kwakawanda algorithms nedata zvinofanirwa kushandira munhu mumwe nemumwe.
Unoda rubatsiro nekushandisa AI / ML mhinduro musangano rako? Taura nekutaurirana.